Ayanle Blog: Gabiley/Guban waa gobol leh dad, dhul iyo dhaqaale leh, una taagan nabada Somaliland – Guban Media
The plains of Tog-Wajaale, Gabiley/Guban region. (photo/Ali)
August 19, 2019 August 26, 2019 Ali Mohamed 639 Views 1 Comment
Inta S​omaliland dimuqraadiyadu ka jirtay waxa halhays noqday: Cidday Gabiley u codayso ayaa guulaysata.Gabiley waxay noqotay Ohio yadii Somaliland. Waxaan muran ka taagnayn inay Kursiga dalka u sarreeya ay reer Gabiley saareen madaxwayne Siilaanyo 2010 iyo Madaxwayne Biixi 2017. Xisbiyadoo dhanna qireen in Gabiley guusha lagu kala helo.
Siyaasiinta Somaliland ma doonayaan inay ka hadlaan arrinta xuduudada gobolada Somaliland. Siyaasi walba waxa ku qafilan haddii aad Ka hadasho xuduudada gobolada siiba kuwa Awdal inay luminayaan codka reer Borama.
Siyaasiintiisa gobolka oo qaybsan, badankooduna ay yihiin dad reer ahaan uun lagu doortay oon aqoon, garaad oo wax qadiyada gobolka dhaafsaday jago iyo dan gaar ahaaneed.
Hadaba maxaa la gudboon dadweynaha reer Gabiley/Guban ?
Siyaasiin badan oo reer Hargeysa ayaa weli u haysta Gabiley, Wajaale, Alleybadey, Arabsiyo, tuulooyin yar yar oo duleedka Hargeisa ah. Siyaasiintaas weli waxay moodaan in wadanku uu 1960 ku jiro. 1960, magaalada ugu dad badnayd Somaliland waxay ahayd Berbera.Laakiin, maanta lagu ma jiro 1960. Gobolka Gabiley/Guban noqon maayo gobol dadkiisa iyo dhulkiisa abatarsiimo lagu sheegto, laguna helo codad lagu gaaro xafiis sare.
← Ugandan police say 20 killed in deadly motor accidents
Cameroon tribunal sentences separatist leader to life →